Citizen casts invalid vote due to USDP members being inside the voting station. Claims no election education given. မဲပေးသည်။ ပယ်မဲပေးခဲ့သည်။ မဲရုံများတွင် ကြံ့ဖွံ့များချထားသည်။ ကြံ့ဖွံ့မှ မုန့်ဝေ၊ ဦးထုတ်များပေးပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းနေသည်။ လူထုကို ပညာပေးတာ | Burma Election Tracker
Citizen casts invalid vote due to USDP members being inside the voting station. Claims no election education given. မဲပေးသည်။ ပယ်မဲပေးခဲ့သည်။ မဲရုံများတွင် ကြံ့ဖွံ့များချထားသည်။ ကြံ့ဖွံ့မှ မုန့်ဝေ၊ ဦးထုတ်များပေးပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းနေသည်။ လူထုကို ပညာပေးတာ Posted in abuse of government authority